Friday, January 18, 2013 at 1:12 PM | By: Nwae Oo May
မေမေ ကျမကို.. မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်.....
ဇန္န၀ါရီ တစ်ဆယ့်ရှစ်… မနက် တစ်နာရီ ၂၁ မိနစ်…
မေမေ.. ကျမကို.. သိပ်ချစ်ခဲ့တယ်တဲ့…လေ….
အဦးဆုံး သမီးမို့.. အရူးအမူးဖြစ်…
ဖေဖေကလည်း.. သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်…. လေ…။
ဆောင်း နှောင်း နွေ ဦး…
လေရူးလည်း သုန်.. နှင်း မကုန်သေးချိန်ကြား..
အရူးအမူးချစ်လို့… ဘ၀ထူးဖို့.. ရည်စူး…
“နွေဦးမေ” ဟု.. ပညတ် မည်တွင်….
မေမေ ဖေဖေ နှင့်.. အတူနေ…
သမီးလေး နွေဦးမေ … သိပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရဖူးတယ်လေ….
တတိုင်း ရတဲ့.. သူဌေးသမီး ဘ၀ … မဟုတ်ခဲ့ရပေမယ့်….
ကြံတိုင်း အောင်လို့.. ဆောင်တိုင်း မြောက်စေတဲ့.. အစွမ်း….
သမီးလေး ရင်မှာထွန်း.. ပေါက်…
အလိုရှိရာ .. ဘ၀ကလေး တစ်ခုကိုတော့.. ရောက်စေခဲ့သားပဲ.. လေ…။
မေမေ ပေးခဲ့တဲ့.. အသက်နှင့် ....
ရှေ့ခရီးသို့.. တစ်နှစ်... ဆက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ...
ကိုယ်လိုချင်သည်…. မှန်သမျှ.. ရအောင်… စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ဘ၀မျိုး….
သူတစ်ပါး… အားကိုးလိုသော စိတ်တို့ကင်း…
ဘ၀ရဲ့.. ဆင်းရဲခြင်းတို့.. ကြုံကြိုက်သော ကာလတိုင်းမှာ….
ခိုင်မတ်စွာ… လမ်းလျှောက်… အောင်မြင်ခြင်းသို့ ရောက်တတ်စေရေး ...
လက်ဆယ်ဖြာ ဦးစုံချလို့…. “ပြာသိုလပြည့် အမေနေ့”အမှီ…..
ကုသိုလ် ရည်မှတ်.. ဒါနမြတ်တို့.. ဦးခိုက် လှူဒါန်း..
သည် နွေ မိုး ဆောင်း… အလီလီ ပြောင်းရွေ့ပါစေ….
ကောင်းရာ မွန်ရာ ဘုံဘ၀မှာ.. ထာဝရ… ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ရပါစေ....။
★“ရင်ညှို့ရပ်ဝန်း”♪♫ (သို့မဟုတ်) ★“သျှတ္တရ၀သ အထူးသတင်း ကြေငြာချက်”♪♫
ရွာရန် ရာနှုန်း.. ၉၀ ရှိမည်...
“ချိုက်” ကပ်ကျေးများ.. ရောင်းရန်ရှိသည်..
ဦးသူ ၀ယ်ထား.. ဈေးမများပါ…။
fb နယ်မြေသည်.. ကစားကွင်း မဟုတ်..
၁၂ အောက် ကလေးများ.. ၀င်မလာရ…
မနေ့တုန်းဆီက .. နေ သာတယ်...
ရင်ခွင်တစ်ရိုးမှာ… ပန်းတွေ ပွင့်လို့…
မိုးမည်းလေသော... သည် ကောင်းကင်…
ပြာကျနေတာ.. နှလုံးသား အစစ်ပါ...။
"ဗျတ်ဝိ" သေတာ... ဘယ်သူ့ ချစ်ခြင်းလဲ ….
အသက်နဲ့ လဲတဲ့.. သည် ကွမ်းတစ်ရာ...
"မအိုဇာ" သို့ …
Saturday, January 5, 2013 at 1:48 PM | By: Nwae Oo May
★“ အတုမဲ့ ”♪♫
မေမေဟာ.. သားတို့ အတွက်တော့.. စံပြ မိခင်ကောင်း….
နှစ်တွေ အလီလီဟောင်းနွမ်းလို့.. သက္ကရာဇ်တွေ .. အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းရွေ့သွားပါစေ…
မေမေ့ မေတ္တာတွေကတော့.. ထာဝရ နုပျို လန်းဆန်းနေမှာကို..
သားလေး ယုံကြည် မြတ်နိုးပါတယ် မေမေ…။
ဖေဖေ ရှိစဉ်.. ကာလတုန်းက..
ပန်းကလေး တစ်ပွင့်လို.. နုနယ်ခဲ့တဲ့.... မေမေ…
အခု ဖေဖေ မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာလည်း… စမ်းချောင်းကလေးလို.. အေးမြဆဲပါပဲ….။
ဖေဖေ့ အရိပ်မှာ အပူပင်မဲ့စွာ နေခဲ့ရချိန်… ကတည်းက..
မျက်နှာတစ်ချက် အညှိုး မခံခဲ့ပေမဲ့… မေမေကလည်း.. ဖေဖေ့အပေါ်… မဆိုးခဲ့ဘူးနော်…
ဖေဖေ့ကို.. အားကိုး မှီတွယ်. ချစ်ခင်ခဲ့တဲ့ မေမေဟာ.. သားတို့ အပေါ်ကျတော့လည်း… ကြင်နာစွာ… အလိုလိုက်… ချစ်ခင်ပေးနိုင်လွန်းခဲ့ပါတယ်..
မွန်ရည် လှတဲ့.. မေမေ့မျက်နှာ လပြည့်ဝန်းဟာ.. နူးညံ့မှုတွေ လွှမ်းခြုံနေခဲ့ပါတယ်….
ဂရုဏာမျက်ဝန်းတွေက… အကြင်နာ အရိပ်တွေ…. စိမ့်စီး ယိုကျ.. ပေးဝေနေတတ်ပါတယ်...…
မေမေ့ ရဲ့.. ဖူးစို ပြည့်ဝန်းတဲ့… ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ..
ညင်သာတဲ့ စကားလေးတွေနဲ့.. အသံမာမာတောင်.. မပြောတတ်ခဲ့ပေမယ့်….
တင်းမာ ပြတ်သားသူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့… နှုတ်ခမ်းပါးမျိုး.. မေမေ့မှာ ရှိမနေခဲ့ပေမယ့်လည်း…
မေမေရဲ့ နူးညံ့တဲ့.. နှုတ်ထွက်စကား တစ်ခွန်းဟာ.. သားတို့အတွက်.. အတည်ပြုချက်ပါပဲ မေမေ..
တက်ကြွရိပ်ကဲတဲ့.. ရဲရဲတောက်စကားတွေ.. မေမေ့ထံမှာ ကြားရလေ့ မရှိခဲ့ပေမယ့် …
ညှိုးလျ ငြီးငြူ စကားမျိုးလည်း..မေမေ ပြောလေ့ မရှိခဲ့ဘူးလေ..
ဘ၀ရဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး ထိုးနှက်ချက်.. လောကဓံ ရဲ့.. ရိုက်ချက် ပြင်းပြင်းတွေ အောက်မှာ..
လူးလူးလှိမ့်လှိမ့်… ပြိုလဲကျမတတ်… ခံစား.. ရပ်တည်နေခဲ့ရပေမယ့်.. အားမပျက်ခဲ့တဲ့.. မေမေ…
သားတို့ ရှေ့မှာလည်း… တစ်ချက်ကလေးမှ.. အပြုံးမပျက်ခဲ့တာ….
မေမေ ငိုမှ ငိုတတ်ပါရဲ့လား….?
သားတို့ရဲ့… ချမ်းမြေ့သာယာတဲ့ မိသားစု ဘ၀ကလေးထဲကနေ.. ဖေဖေ တစ်ယောက် .. အသေချာ ခွဲထွက်သွားရတော့မယ် ဆိုတာကို… တစ်နှစ်ခွဲလောက်.. ကြိုသိခဲ့ရပေမဲ့.. မေမေ မျက်ရည် ကျတာကို.. သားတို့ မြင်ဖူးခွင့်.. မကြုံခဲ့ရ…။
မေမေ ဘယ်အားမာန်တွေနဲ့များ.. ကြံ့ကြံ့ ခံခဲ့ပါသလဲ မေမေရယ်…။
ပြုဖွယ် ကိစ္စ မှန်သမျှ…. မလစ်ဟင်းစေရ…။
ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ တစ်ပါတ်.. အိမ်ကလေးထဲမှာ.. တစ်ပါတ် နဲ့… လှည့်လည်ရင်း…. သေမင်းနဲ့ စစ်ခင်းနေခဲ့ရတဲ့.. ဖေဖေ့ အတွက်လည်း ၀တ္တရား မပျက်စေရ….။
ကျောင်းအတန်းကလေး အတန်အသင့်ရလာလို့… အလယ်တန်းကျောင်း ရောက်စ ပြုနေတဲ့.. သားတို့ နှစ်ယောက်အတွက်လည်း..
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုမှာ.. HR & Admin Manager ဆိုတဲ့.. ရာထူးကြီးကြီး တစ်ခုရဲ့…. လုပ်ငန်း တာဝန် မှန်သမျှကိုလည်း မပျက်ကွက်စေခဲ့ရ…။
သိမ်မွေ့ နူးညံ့လွန်းတဲ့.. မေမေ…
ဘယ်လိုတွေများ ရင်ဆိုင် ရုန်းကန်ခဲ့ပါသလဲ မေမေရယ်….။
မေမေ… ရေ… !
ဖေဖေ မဆုံးပါးခင်က.. ငယ်ရွယ်လွန်းသေးလို့…. ဘာမှ မသိတတ်ခဲ့သေးတဲ့ သားတို့…..။
မေမေ့ အပြုံးမျက်နှာလေးကို.. မြင်နေရတိုင်း… မေမေ့မှာ ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်လို့.. သားတို့ ထင်မှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် မေမေ…။
ငြီးငြူ ငေါက်ငမ်းသံ.. တစ်ချက် မကြားရတိုင်း…. မေမေ့မှာ.. အရာရာ အဆင်ပြေနေခဲ့တယ်လို့.. သားတို့ ထင်မှတ်ခဲ့မိပါတယ်.. မေမေရယ်….။
သား… သိပါပြီ…. မေမေရယ်…။ သားကို .. ခွင့်လွှတ်ပါနော်….။
သားတို့ အတွက်.. တံတိုင်း တစ်ခုလို.. ကာရံထားပေးခဲ့တဲ့.... မေမေ့ ရဲ့.. အားမာန်တွေ…။
မေမေ စိတ်မပျက်စေရပါဘူး နော်…။
“မေမေ့ ဘ၀ အတွက် ဘာမှ မလိုပါဘူး..။ သား တို့ ဘ၀တော့ လှမှ ဖြစ်မယ်.. ပညာနဲ့ပဲ.. ဘ၀ရပ်တည်နိုင်မှ မေမေ စိတ်ချနိုင်မယ်နော်”.. ဆိုတဲ့ စကား… သားရဲ့… နားနဲ့ ကြားခဲ့ရပေမဲ့… သားရဲ့.. နှလုံးသားမှာ.. ထာဝရ သိမ်းဆည်းထားပါတယ် မေမေ…။
သိပ်.. မကြာတော့ဘူးလေ မေမေ..။ မကြာခင် ကာလ.. နောက် လေး.. ငါး .. ခြောက်နှစ်ဆို… သားတို့ အရွယ်ရောက် လူလားမြောက်ပါပြီ…။ ဆိုခဲသလောက် မြဲခဲ့တဲ့.. မေမေ့စကား နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အတိုင်း သားတို့ လူလားမြောက်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် မေမေ…။
မေမေ့ ဘ၀အမောတွေလည်း … သိပ်မကြာခင်.. ကာလတစ်ခုမှာ... ပြေပျောက်စေရမှာပါ မေမေ…။ သားတို့ရဲ့.. တစ်ဖန်တစ်လှည့် တာဝန်ယူမှုတွေမှာ… မေမေ တစ်ယောက် အပန်း ပြေရခါ နီးပါပြီနော်…။
မကြာခင် ကာလမှာ.. မေမေ မွေးပေးခဲ့တဲ့… ဖ၀ါး လက်နှစ်လုံးလေးက စခဲ့တဲ့.. သားတို့ရဲ့.. သန်မာတဲ့…. ခြေထောက်တွေနဲ့..
ကမ္ဘာကို ပတ်မယ် မေမေ…။
မေမေ ပေးခဲ့တဲ့… ပခုံးနှစ်ဘက်ကနေ ဆင့်ပွားလာတဲ့ .. လက်နှစ်ဘက်နဲ့…. မေမေ တ,လိုက်မိတိုင်း… ရရှိနိုင်အောင်.. ဖန်ဆင်းပြီး… မေမေ့ဘ၀ကလေး… အေးချမ်းစေရပါ့မယ်….။
ဘ၀ အမောရဲ့.. သောက အပူလှိုင်းတွေကြားမှာ.. မငြီးငြူစတမ်း.. အားမာန်ထားခဲ့တဲ့.. မေမေရဲ့.. ကျေးဇူးတွေ… မကျေနိုင်မှန်း သိပေမဲ့လည်း… မေမေ ရင်ဝမ်း.. ငြိမ်းချမ်းစေရအောင်.. တစ်ပြန်တစ်လှည့်.. သား ပြန်ဆပ်ခွင့်.. ပြုလှည့်ပါနော်……။
ဒီသားလေးရဲ့… ချွေးစက်တွေနဲ့.. ရင်းနှီးလဲလှယ်လို့... မေမေ့ နှလုံးအိမ်က.. မျက်ရည်စက်တွေ.. ခန်းခြောက်ကာ… ဘ၀ကန္တာရထဲက.. အိုအေစစ်ကလေး တစ်ခုရဲ့.. ရပ်ဝန်းမှာ.. မေမေ ရောက်ရှိ.. ပျော်ရွှင်စေရပါ့မယ်လို့.. သားလေး ကတိပြုပါတယ် မေမေ…..
သားရဲ့… မေမေ.. ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ…။
နှလုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်းရပါစေ…..။
ချမ်းမြေ့ .. နှစ်ခြိုက်စွာ.. အိပ်စက် ပျော်ပါစေ.. သားတို့ ချစ်တဲ့ မေမေရယ်….။
(သားတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်)
Nwae Oo May
ဆောင်းချမ်းကာလ… နှင်းဖြန်းထားတဲ့.. ညတစ်ညအလွန်.. အာရုဏ်သစ်တစ်ခု.. အစမှာ... မေမေ ကျမကို.. မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်..... ဇန္န၀ါရီ တစ်ဆယ့်ရှစ...
ချစ်သူငယ်ချင်းလေး.. ရတုသစ် အတွက်.. ယနေ့ ကျရောက်သည့် မွေးနေ့ ကလေး အတွက်. အမှတ်တရ အဖြစ်.... ...
★" ကဗျာ (သို့) ရင်ဖွင့်သူ"♪♫
ကဗျာဟာ.. ငါလား… ငါဟာ.. ကဗျာလား… ခွဲခြားဘို့ ခက်လှပေမဲ့ …. ငါ ပျော်ရွှင်တဲ့အခါ… ငါ့ အဖေါ်ဟာ.. ကဗျာ…. ငါ စိတ်ညစ်တဲ့ အခါ… ဖေးမပေးတ...
”♪ ကာရံမဲ့သော ဘ၀ကဗျာ♫”
ဆုံခဲ့ရသော.. ဟေမာန်ဦး… ရူးမတတ်.. ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတာလည်း... တစ်ဘ၀စာ ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်မောင်! အတူ လျှောက်ဖူးသော လမ်း… ဖြတ်သန်းခဲ့သေ...
တစ်လောကလုံးမှာ…. ဘယ်သူဘယ်ဝါ…. ဘယ်လောက်ပဲ… ရိုင်းပါစေ…. ကိုယ်.. မပါဘူး နော်....။ မှန်လို နေဖို့… ကြိုးစားချင်ခဲ့လည်း… ဒီမှန် တစ်...
မေမေ … သားသိပ်ချစ်တယ် မေမေရယ်… မေမေဟာ.. သားတို့ အတွက်တော့.. စံပြ မိခင်ကောင်း…. နှစ်တွေ အလီလီဟောင်းနွမ်းလို့.. သက္ကရာဇ်တွေ .. အကြိမ်ကြိ...
မင်း..မရှိတာ့ဘူးဆိုတာ.. လက်ခံလိုက်ဖို့.... ဝေစို့နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေက.. ဆန္ဒပြနေဆဲပါ..မောင်.....။ တို့ဆောက်ခဲ့တဲ့... အိမ်ကလေးက... အသေးအကြ...
★" မမုန်းရက်တဲ့ အချစ်"♪♫
မမုန်းရက်တဲ့ ချစ်သူရေ… ငါတို့တွေ့စ… မေ့မရချင်.. ရင်ပင်လယ်မှာ... အလှဆုံး အပြုံး.. ဖုံးအုပ်ကာထား... နှလုံးသားကျွန်း.. ပီတိရွှန်းဝေ...
★ "အဖြူရောင် သံယောဇဉ်"♪♫
အဖြူရောင် သံယောဇဉ်လေးရေ... ဒီမြေကမ္ဘာရဲ့… တစ်နေရာမှာ ... မင်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့… အသိအတွေးနဲ့တင်... ငါလေ.. တိတ်တိတ်ကလေး ... ပျော်ရွှင...
★“ မောင် ချစ်သည့် ဆောင်း”♪♫
မြူမှုန်ဖွေးလွ.. ချမ်းအေးမြသည် မြောက်ပြန်လေကူး.. ညှင်းလေမြူးလွင့်. ပန်းစုံဖူးပွင့်.. ရနံ့လွှင့်နေ. နှင်းပွင့်ဝေစီ.. သဏ္ဍာန်ညီမှ. ဆော...
snowStorm.flakesMaxActive = 100; // show more snow on screen at once snowStorm.useTwinkleEffect = true; // let the snow flicker in and out of view
Copyright © 2010 - ဆောင်းသစ္စာလွင်ပြင် - is proudly powered by Coupon codes.